3 Askari Jabuutiyaan ah oo ku dhaawacmay Weerar ka Dhacay degmada Jalalaqsi.
Sunday February 03, 2019 - 14:52:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale weeraro aad u xooggan ku qaaday saldhigyo melleteri oo ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Jabuuti ee degmada Jalalaqsi, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan sedax askari Jabuutiyaan ah ay ku dhaawacmeen weerarkii saaka ka dhacay degmada Jalalaqsi, diyaarad nuuca qumaatiga ukaca ah ayaa caga dhigatay saldhigga ciidamada Jabuuti iyadoo halkaas ka qaadday dhaawacyo.
Dhinaca kale ciidamada Al Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe guluf dagaal ku qaaday gudaha degmada Afgooye ee Sh/hoose, Maxamed Ibraahim Barre oo ah guddoomiyaha Afgooye ayaa warbaahinta Muqdisho u sheegay in ciidamadooda weerar adag lagusoo qaaday balse ay iska caabiyeen sida uu hadalka u dhigay.
Habeenkii jimcaha ayay aheyd markii Al Shabaab ayaa weeraro khasaara badan dhaliyay ka fuliyeen degmooyinka Balcad iyo Afgooye.